Furayaasha xulashada baaskiil ku habboon ee aad waligaa rabtay inaad haysato | Ragga Stylish
Hadaad ka fiirsanaysid inaad sameyso jimicsiga banaanka, baaskiil wadista ama jidadka baaskiil wadista iyo shaki ku saabsan sida iibso baaskiil ku habboon, waxaa jira tilmaamo qaarkood oo aad ku xisaabtami karto, waqtiga iibsiga.
Baaskiil ku habboon ayaa kordhin doonta iska caabintaada wadnaha, dhiigkarka hoose iyo murqaha midabka jirkaaga hoose. Waxaad u isticmaali kartaa xilliyada firaaqada, socodkaaga iyo jidadkaaga, isboorti ahaan iyo sidoo kale gaadiid magaalada ku dhex wareegaya.
Badanaa markaan tijaabineyno mashiinkeena cusub si aan u doorano baaskiil ku habboon, waxaan doorannaa moodel leh sarkaal aad u hooseeya, kaasoo waxyeelo u geysan kara jilbaha iyo qeybaha kale ee jirka mustaqbalka fog.
1 Talo si aad u hesho baaskiil ku habboon
2 Buur ama waddo
Talo si aad u hesho baaskiil ku habboon
Habka ugu fiican ee aad ku heli karto baaskiil ku habboon baahiyahaaga iyo doorbidkaagu waa taas adeegso xirfadle iibiya. Waxay ku saabsan tahay qiimee nooca baaskiil aad damacsantahay inaad sameyso, waxa aad u isticmaali doontid baaskiilka iyo mishiinka ku haboon jilitaankooda jireed.
Maaha wax isku mid ah inaad rabto in baaskiilku u aado shaqada, mararka qaarkoodna uu u baxo dabiicadda, ama uu ku sameeyo masaafo badan. Ka soo cabirka baaskiilka, markaa way kala duwan yihiin qaybaha ay tahay in la waafajiyo astaamaha qofka adeegsan doona.
Buur ama waddo
Faa'iidada ugu weyn ee baaskiilada wadada waa inay farsamo ahaan fudud yihiin in la fuulo. Sababta oo ah xaqiiqda ah in dhulka ay ku rogi doonaan inta ugu badan ay yihiin laami, dhibka wadista baabuurku aad ayuu u hooseeyaa.
ka baaskiilada wadada, sida magacooda ka muuqata, waxaa loogu talagalay inay masaafad dheer kula raac xawaare joogto ah. Waxay leeyihiin qaab fudud isla markaana qeybahoodu raadiyaan waxqabadka ugu sarreeya.
Dhanka kale, Baaskiiladaha buuraha ayaa ka xoog badan kana xoog badan, oo leh taayirro dhumuc weyn iyo jiido sare. Naqshadeedu waxay gaar u tahay wadista baabuurta wadooyinka xaaladoodu liidato.
Ilaha sawirka: Okdiario / Training.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Sidee loo doortaa baaskiilkaaga ugu fiican?
Sida loo xirto gaab xagaagan (sida uu qabo Reiss)